Shah Rukh Khan (wuxuu dhashay 2 Noofambar 1965), oo sidoo kale loo yaqaanay magaca 'SRK', waa jilaa Hindi ah, soo saare filim, iyo shaqsiyad telefishan. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay Baadshah of Bollywood (marka loo eego filimkiisii ​​1999 ee Baadshah), King of Bollywood iyo King Khan, wuxuu kasoo muuqday in kabadan 80 Aflaanta Bollywoodka, wuxuuna kasbaday abaalmarino badan oo ay kujiraan 14 Filmfare Awards. Dowladda India waxay u abaalmarisay Padma Shri, Dowlada Faransiiskana waxay ku abaalmarisay Ordre des Arts et des Lettres iyo Legion of Honor. Khan wuxuu leeyahay muhiimad soo socota Aasiya iyo qurbaha India ee adduunka oo dhan. Marka laga hadlayo cabirka daawadayaasha iyo dakhliga, Waxaa lagu sharaxay inuu yahay mid ka mid ah jilaayaasha filimada ugu caansan adduunka.
(1965-11-02) 2 Nofeembar 1965 ( 54jir)
New Delhi, Hindiya 
soo saare filim
Gauri Chibber (g. 1991)
1 Nolosha hore
2 2.shaqada uu ka shaqeeyo
3 3.Guul u Ba'an iyo ganacsiga : 1993-97
4 4.1998-2002: aqoonsi International
5 5.2003 : dhaawac kheyr iyo qalliin ku xiga
6 6.2003-10: jilista iyo ogey
7 7.2011 - jooga : ee kale Continuing
Khan waxa uu ku dhashay on 2 November 1965 ee New Delhi , India , oo soo koriyey ee Mangalore ee shanta sano ee ugu horreeya ee uu noloshiisa . oo uu awoowe uu ahaa injineer Chief ee Mangalore dekadda 60eeyaha . Markaasaa aabbihiis , Taj Mohammed Khan , korsiay qowmiyad , waxay ahayd dhaqdhaqaaqe madaxbanaanida Indian from Peshawar , British Hindiya ( maanta Pakistan ) . [ 23 ] Sida ay Khan , board- dhiganayo asal ahaan wuxuu ka yimid Afgaanistaan ​​. [ 24 ] oo hooyadiis , Lateef Fatima , waxay ahayd gabadhii qaatay ee Shah Nawaz Khan , General Major ah ee Ciidanka Qaranka Hindiya . [ 25 ] Shahrukh Khan aabihii in si New Delhi ka yimid Qissa Khawani Bazaar ee Peshawar ka hor 1947 Risaalo ka mid ah Hindiya .  marka laga inuu asal ahaan , Khan wuxuu isu sharaxay on Twitter sida " hyderabadi kala badh ( hooyada ) , nus korsiay (aabbihiis) , Kashmiri qaar ka mid ah ( ayeeyo ) "  Aabbihii waa uu dhintey kansarka markii Khan ahayd 15 sano jir , iyo hooyadiis ku dhintay 1990 ka dib markii xanuun daba dheeraaday . [ 28 ] [ 29 ] Khan oo ahaa mid aad u lifaaqan Waalid inuu u aqbalin sida ilmo iyo qeexayaa dhimashada ay hore sida tub in uu nolol iyo sida uu dhiiranaanta ugu weyn ee shaqo adag . Khan wuxuu leeyahay walaashaa ee oday la odhan jiray Shehnaz . [ 30 ]
Koritaanka ee xaafadda Rajendra Nagar ee Delhi ,  Khan qeyb galay St Columba ee School [ goorma? ] Iyo College Hansraj ah ( 1985-1988 ) xoogsigiisa Bakalooriyada in Economics . In kasta oo isna wuu eryooday Darajo Masters ah ee Mass Communications at Jamia Millia Islaam , mar dambe ayuu u baxay ciidan ah ee Bollywood . [ 32 ] Sidoo kale wuxuu ka qeyb galay School Qaranka ee Drama in Delhi . [ 33 ] [ goorma? ]
Dhimashaddii hooyadiis ka dib , Khan guuray Mumbai 1991 . [ 34 ] wuxuu guursaday Gauri Chibber , Hindu ah , in xaflad aroos dhaqameed Hindu on 25 October 1991 . [ 28 ] Sida ay Khan , halka wuxuu si xoog leh uu rumaysan yahay in Islam , ayuu sidoo kale waxa la qiimeeyo diinta xaaskiisa . Marka guriga , carruurta uu raaco diimaha labada , kula Quraanka lagu soo socota inay timaado ku sameeyay ilaahyadii Hindu .  Waxay leeyihiin wiil ( B. 1997 ) 'Ra' iyo gabadh Suhana ( B. 2000 ) . In 2013 waxay noqdeen waalid ilmo saddexaad magacaabay Aabraam [ 36 ] via hooyada gaadh ah . [ 37 ] [ 38 ] Khan walaasheed ka weyn Shehnaz sidoo kale [ 39 ] iyaga la deggan yahay .
2.shaqada uu ka shaqeeyoEdit
Khan bartay cuskanaysa kudayasho suuban ee agaasimaha tiyaatarka Barry John at Delhi ee " Theatre Action Group " ( TAG ) Khan doorka ugu horeeya ee cardigan ahaa ee taxanaha telefishanka Lekh Tandon ee Dil Dariya , laakiin sabab u tahay dib u dhac -soo-saarka , taxane telefishan 1988 , Fauji wuxuu ahaa ugu horeeyay ee telefishanka uu . Waxa uu ciyaaray doorka hoggaamineed ee Commando Abhimanyu Rai ee show ah loo amaano , kaas oo isaga tiro aqoonsi kasbaday . [ 34 ] [ 41 ] wuxuu on galay inuu u muuqdaan in Aziz Mirza ee Circus ( 1989 ) [ 42 ] iyo waxay door yar yar ee lagu sameeyo -for- telefishanka filim luuqadda Ingiriiska , kaas oo Annie siiyaa Waxa kuwii ( 1989 ) . Wuxuu kasoo muuqday teleserials kuwan , oo keentay dhaleecayn inay is barbar dhigaan style jilitaanka leh in filimka jilaaga Dilip Kumar . [ 43 ] In 1991 , Khan daadatay iyo salkeeda ilaa Mumbai iyo heshay filimka dalab ugu horeeyay ee ay la Hema Malini ee ugu horeeyay directorial Dil Aashna Hai . [ 34 ] si kastaba ha ahaatee , ay sabab u dhac -soo-saarka , filimka labaad , Deewana (1992) , garab Rishi Kapoor iyo Divya Bharti marka hore la sii daayay . [ 33 ] Filimku wuxuu noqday a hit xafiiska sanduuqa , iyo bilaabay xirfadiisa Bollywood [ 44 ] oo uu ku guuleystay Filmfare ahBest Award Male kooxda , sanadka soo socda . [ tigidka loo baahan yahay ]
Khan iyo xaaskiisa Gauri Chhibber ee 2012 ; waxay guursatay xitaa ka hor ayuu xirfadda filimka bilaabay in 1992 In 1992 wuxuu ciyaaray dabeecadda Malasfax in comedy ah , Gentleman Raju Ban Gaya , kaas oo ahaa inuu ugu horeysay ee shaqayntu badan leh jilaa Juhi Chawla .Filimku wuxuu cadeeyay inuu yahay a hit xafiiska sanduuqa . [ 45 ] wuxuu on galay inuu star in Ketan Mehta ee Maya doonaa jilidda (1993) , la qabsashada ah ee Gustave hit counter ee sheeko Madame Bovary . Marka la sii daayo , filimka guud khilaaf ee Hindiya ay sabab u tahay muuqashada Khan ee ah " cad " goobta galmo la wada -star Deepa Sahi . [ 46
Khan iyo xaaskiisa ee <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gauri_Khan" title="Gauri Khan">Gauri </a>Khan2012; waxay guursatay xitaa ka hor ayuu xirfadda filimka bilaabay in 1992
3.Guul u Ba'an iyo ganacsiga : 1993-97Edit
In 1993 , Khan , irdaha mahadnaq ah ee la kulaney ee doorarka negative , in of an lover waswaas ah iyo mid dhiig qaba , siday u kala horreeyaan , in xafiiska sanduuqa Hits , Darr iyo Baazigar . [ 47 ] " Encyclopedia of Hindi daweeyaa " ayaa lagu falanqeeyay in "ayuu ku cayday image ee geesiga caadiga ah ee labada filimada kuwaas oo abuuray inuu version gaarka ah ee geesiga revisionist . " [ 48 ] Darr calaamadsan ugu horeysay ee shaqayntu badan oo Khan leh film - gaare Yash Chopra oo uu Banner Yash Raj Films . Khan stammering filimka iyo adeegsiga weedha , " waan ku jeclahay , Kkkiran , " waxay ahaayeen kuwo la jecel yahay la leh dhageystayaasha . [ 49 ] deyntiisa kale , Baazigar , kaas oo uu ciyaaray aarsada aan la qiyaasi karin , kuwaas oo dil isaga iyo xaaskiisa , " argaggixiyey dhageystayaasha Indian " oo leh xad-gudub ah lama filaan ah oo ka mid ah caanaha caadiga ah Bollywood . [ 50 ] isaga waxqabadka ee Baazigar isaga ku guuleystay inuu Filmfare Award Best Actor marka hore .
Isla sanadkii , Khan ciyaaray doorka muusikiiste jacaylka - ku dhuftay ah ee Kundan Shah ee dramedy Kabhi Haan Kabhi Naa , waxqabadka in isaga ah Dhaleeceyn Award Filmfare for Best Performance kasbaday . In dib u eegis ah kunba in 2004 for Jengeli , Sukanya Verma waxa loo yaqaan Khan waxqabadka ugu fiican . [ 51 ] Khan , isaga qudhiisa ayaa 2006 , inuu filimku this to filimka ugu fiican in uu u dhaqmeen maadan [ 52 ] Sannadkii 1994 , Khan mar kale ciyaaray ah lover waswaas ah Anjaam , co- cardigan Madhuri Dixit . In kastoo filimka ahaa failiure ganacsi , Khan waxqabadka isaga kasbaday Best gool kulaad Award Filmfare ah . [ 53 ]
Sannadkii 1995 , Khan jilay laba blockbusters sanduuq - xafiiska . Isaga oo marka hore loo sii daayo ahaa Rakesh Roshan ee bixijirey melodramatic Karan Arjun , kaas oo Khan ahayd qayb ka mid ah ee kabka ah ensemble ka mid ah Salman Khan , Kajol , Mamta Kulkarni , Raakhee iyo kucawin . Filimku wuxuu , kaas oo la macaamilooday fikradda ah reincarnation , wuxuu noqday filimka labaad ee ugu Idman ee sanadkan ee Hindiya . [ 54 ] wuxuu u raaceen leh ugu horeeyay directorial Aditya Chopra ee , jacayl ah Dilwale Dulhania Le Jayenge . Guul muhiim ah oo ganacsi weyn , filimka wuxuu noqday wax soo saarka sanadka ee ugu sareysa - Idman ee Hindiya ee dibadda iyo [ 55 ] Filimka lagu dhawaaqey ah " Saylac Lughaya waqtiga oo dhan " ; . Ahaatee waxa wali filimka ugu dheer - ordaya ee taariikhda shineemo Indian [ 56 ] iyo sida of 2011 , waxaa weli ku ciyaaraan ee tiyaatarka Maratha Mandir ee Mumbai . [ 57 ] Dilwale Dulhania Le Jayenge ayaa saamayn weyn INR 1.2 billion oo dunida ah . Filimku wuxuu ku guuleystay toban Filmfare Awards , iyo Khan waxqabadka sida NRI yar oo dhacaa for dabeecaddiisa Kajol ee halka safar Yurub oo dhan isaga ku guuleystay ogey iyo Award Actor labaad Best at Filmfare ah . Sannadkii 2005 , Indiatimes Movies kaalinta filimka baahsan ee 25 -ka Waa Eeg Bollywood Films , waxa xusaya sida " trendsetter of noocyo " a . [ 58 ] Raja Sen dib loo eego , " Khan siinayaa waxqabadka a heer sare ah , ayaal lover for 1990 with panache weyn . Waxa uu qabow iyo flippant , laakiin daacad ah oo ku filan in ay rafcaan u Abuukar [ Akhri ] . waxqabadka laftiisu waa , sida ugu fiican ee shirkadu ku , soo ciyaaray si wanaagsan ay u soo gaarto sida effortless ku filan , sida non- jilitaanka . " [ 59 ]
1996 cadaatay in ay hal sano ka niyad for Khan , sidii uu u muuqday in laba failiures muhiim ah oo ganacsi , Praveen Nischol ee Ingiriisi Babu Desi nidaam dawli ah iyo Mahesh Bhatt ' Chaahat [ 60 ] Si kastaba ha ahaatee , sanadkii 1997 , doorka uu cardigan in Subhash Ghai ee riwaayadaha bulshada Pardes isaga kasbaday guul ganacsi . Filimku wuxuu , kaas oo sidoo kale featured Dhyan Chaudhry iyo Apurva arrini marayso , isaga arkeen sawir doorka Arjun , aflaan tallan a moral soo food saartay . Waxqabadkiisa isaga magacaw ah jilaaga ku Best at the xaflad Filmfare Award kasbaday . Ka dibna wuxuu saftay comedy ka taataabtay Aziz Mirza ee , Haa Boss , ka soo horjeedka Juhi Chawla . Marka la sii daayo , filimka la sameeyey dhexdhexaad ah iyo sidoo at the - xafiiska sanduuqa . [ 61 ] deyntiisa kama dambaysta ah ee sanadka ahayd Yash Chopra ee Dalka Koofur Afrika muusikada Saylac Lughaya , Dil to FilmBest . Mashruucu wuxuu , sidoo kale featuring Madhuri Dixit iyo Karishma Kapoor , calaamadsan oo uu wada shaqeyn labaad kula gaare filimka . Khan essayed doorka Rahul , agaasimaha marxaladda ku dhacaa, in jacayl leh mid ka mid ah uu soo sawiri cusub ah , ciyaaray by Dixit . Filimku wuxuu sidoo kale uu qabadka la kulmay mahadnaq muhiimka ah; wuxuu ku guuleystay inuu Award Best Actor saddexaad ee Filmfare ah [ 61 ] .
4.1998-2002: aqoonsi InternationalEdit
Sannadkii 1998, Khan muuqday saddex filimada. Isaga oo marka hore loo sii daayo ahaa Mahesh Bhatt ayaa tallaabo comedy, Karne soo horjeeda Juhi Chawla oo Landmark Bendre. Filimku wuxuu, taas oo ay aragtay isaga door double sawir, calaamadsan oo uu ugu horeeya ee shaqayntu badan oo leh shirkadda wax soo saarka Yash Johar ee, sawdkiina Productions. Si kastaba ha ahaatee Filimka, ku guuldareysatay inay si fiican u sameeyaan xafiiska sanduuqa.  markaa uu ku guuleystay aannu ammaantaada ugu muhiim ah, isaga oo waxqabadka ee Ratnam ee loo amaano Dil Se ... Filimku wuxuu ahaa kii saddexaad ee Ratnam ee afafka, filimada terror in muujinayaa xiriirka aadanaha ka dhanka ah asalka ah oo ah siyaasi Indian, ka dib markii Roja (1992) iyo Bombay (1995).   Khan ciyaaray qayb ka mid ah Amarkant "Amar" Varma, wariye All India Radio an, kuwaas oo horumarisa infatuation ah oo argagixiso ah dahsoon, ciyaaray by Manisha Koirala.  Rediff.com la daabacay, "Khan gaarsiisaa waxqabadka qasab ah. Wuxuu door weyn ka qaba xakameeyaan giijisan, oo qeexaysa ku qotontay superbly." [ 66] Filimka, taas oo dhaqaale ahaan ku guuldareystay in Hindiya, si kastaba ha ahaatee, ah guul ganacsiga dibada,  noqoto Indian filimka ugu horeeya in ay galaan 10 at xafiiska sanduuqa United Kingdom ah. 
Deyntiisa kama dambaysta ah ee sanadka ahayd Karan Johar ee Dalka Koofur Afrika candyfloss, Qaylodhaan Qaylodhaan Hota Hai, kaas oo isaga lagu lamaaneeyey Kajol iyo Rani Mukerji. Filimku wuxuu ku dhawaaqey ah "Saylac Lughaya waqtiga oo dhan", oo leh guud ee adduunka ka badan INR1 bilyan.  Khan ciyaaray doorka Rahul Khanna, arday kulliyadda a, ku dhacaa, in jacayl leh oo uu saaxiib fiican ee, Anjali (Kajol) ka dib markii dhimasho of xaaskiisa, Tina (iisulwasaaraha oo), sannadood ka dib jebinta inay la kulmaan. Waxqabadkiisa isaga badisay Actor abaalmarinta Best xaflad Filmfare sanadka labaad oo isku xiga. Khan sii daayo kaliya ee 1999, baadshah soo horjeeda Twinkle Khanna, waxay ahayd grosser celcelis ahaan, kaas oo uu ku kasbaday a magacaabista Filmfare Award for Performance Best in Doorka bilaha.  Isla sanadkaas, Khan dhigay isaga oo shirkada wax soo saarka gaar ah, Dreamz Unlimited jilaaga, Juhi Chawla oo ah agaasimaha, Aziz Mirza. (Hoos fiiri). Sannadkii 2000, saddex ka wada shaqeeyeen on iyagoo filimka ugu horeeya, Phir Jawan Dil Hai Hindustani. Filimku wuxuu ku furay reviews isku qasan ka soo dhaleecayn iyo dhageystayaasha isu eg iyo ku fashilmeen in ay la jaanqaadaan guusha ganacsi ee filimada hore seddexda ee, Gentleman Raju Ban Gaya iyo Haa Boss. 
Khan sii daayo next ahaa Mansoor Khan tallaabo riwaayad Josh. Filimku wuxuu ku jilay Khan sida Amiiral burcad a Christian in Goa, kula Aishwarya Rai ciyaaro walaashiis mataan. Filimku wuxuu ku ah guusha uu xafiiska sanduuqa ku yaal labada Hindiya ee dibadda iyo.  Vinayak Chakravorty of Hindustan Times ka qoray in Khan "basks in uu kaalin tailormade, xaqii feedhaha leh panache iyo Cumrada ee streetsmart adag."  wuxuu ku xiga ciyaaray ee doorka dahan a Muslim, la garaacay si uu u dhinto inta lagu guda jiro Kacdoon soo socda Risaalo ka mid ah India ee Hey Ram. Directed by iyo wada-cardigan Kamal Hassan, filimka wuxuu ahaa loo amaano iyo loo doortay Hindiya ee galitaanka Film ka Best Language Dibadda faxad sanadkaas.  Intaa waxaa dheer, waayo version Tamil ee filimka, Khan loogu magac daray, isaga oo u gaar ah Khadadka.  deyntiisa kama dambaysta ah ee sanadka ahayd Aditya Chopra ee riwaayadaha Human Immunodeficiency Virus, Mohabbatein, co-cardigan Amitabh Bachchan. Filimku wuxuu ahaa guul weyn ee dhaqaale, iyo Khan waxqabadka sidii macalinka music a ahaa marsiiyey by dhaleecayn; Taran ceyrow ee Bollywood Hungama ku xusan isaga noqon "aad u fiican sida Raj loo raacshay." Wuxuu ahaa la siiyay uu labaad Filmfare Dhaleeceyn Award for Best Actor for waxqabadkiisa filimka.
Sannadkii 2001, Khan soo saaray iyo essayed doorka Malasfax in Tacaddi waxa taariikhi ah Santosh Siwaan ee, Asoka, koonto qayb fictionalized ee nolosha Ashoka weyn.  Filimku wuxuu ahaa baaray at Film barakiciyay ay ka Festival iyo 2001 Toronto International Film Festival si . jawaab togan  Filimka, kaas oo sidoo kale featured Kareena Kapoor helay reviews guud ahaan wanaagsan leh Khan qaata reactions wanaagsan oo uu waxqabadkayagu; ". ayuu bulsheed ee waxqabadka xoog leh, in xilkaan si fiican u qeexay" Xusay gabagabeeyey in 
Soo socda isaga oo la kaashanaya Karan Johar oo mar kale Riwaayadda qoyska, Kabhi Khushi Kabhie Gham, kaas oo uu saftay sida qayb ka mid ah ee kabka ah ensemble ka mid ah Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Kajol, Kareena Kapoor iyo Hrithik Roshan. Filimku wuxuu ahaa guul weyn ee dhaqaale ee Hindiya iyo top Idman-soo-saarka dalka Hindiya oo dhan-time suuqa dibada ilaa 2006, kasbanayaan in ka badan INR 1.17 billion oo dunida ah.  Khan wixii qadaf ah ee Rahul Raichand, wiil ay korsatay dabeecaddiisa Bachchan ayaa, bal yaa isaga u Ki for guurinayay gabar ka tirsan koox hoose dhaqan-dhaqaale badan qoyskiisa, ciyaaray by Kajol, ayaa la kulmay mahadnaq dadweynaha ballaaran. Khan ku tilmaamay qof ee Rahul by leh, "Waxaan jeclahay ee nuglaanta iyo daacadnimo ku jira inuu indhihiisa. Wuxuu leeyahay racfaanka ee wiil albaabka ku xiga. Sokow, uu xoogga iyo awoodda ay u gaarsiin caadifadaha oo aan erayada waa yaab."  Taran ceyrow iyo dib u eegeen, "Khan haddana mar kale sparkles", oo ogaaney in uu sameeyaa qayb ka ah "oo leh koobay Madaxweynaha la yaab leh, fasalka, daacadnimo iyo bisaylkooda".  Waxaa rafaadka magacaabista kale for Award Filmfare Best Actor. Khan galin dagdag ah Kabhi Khushi Kabhie Gham sida "tub in mustaqbalkiisa ciyaareed ah". 
Sanadkii 2002, Khan ciyaareen door titlular ee Sanjay Leela Uur ee Dalka Koofur muddo, Devdas, kaas oo ahaa Bollywood filimka ugu qaalisan ee abid lagu sameeyo waqtiga.  Tani waxay ahayd Hindi dhaqaaleedka filim saddexaad ee Sharat Chandra Chattopadhyay ee sheeko of magac la mid ah. Featuring soo horjeeda Aishwarya Rai iyo Madhuri Dixit, Khan waxqabadka sida khamriga ah oo caasiyoobay, oo ahaa iyo sidoo kale helay iyo wuxuu ku guuleystay weli Award kale Actor Filmfare Best. Filimku wuxuu shaac baxeen sida filimka ugu sareeya Idman ee sanadkan ee Hindiya iyo wadamada dibadda, kasbanayaan dakhli ah ee INR84 crore (US $ 13 million) oo dunida ah.   Devdas ku guuleystay abaalmarinta badan, oo ay ku jiraan 10 Filmfare Awards oo la helay baaritaanka gaar ah at the 2002 Film Festival Cannes.   Waxaa helay magacaabista Bafta for Film Best Language Dibadda iyo sidoo kale ahaa Hindiya ee galitaanka Film ka Best Language Dibadda faxad. Waraysi uu la yeeshay Rediff.com, Khan commented, "stars Waxaan ku nooshahay xumbo this halkaas oo qof walba waxa uu dhoola aad at, halkaas oo qof waliba wuu idin jecel yahay. Calashaan, waxaad waayi la xiriirto dhab ah, oo qoto dheer hoos u murugo. Working on filim this naga xiri qaba dareen in. " Ka dib markii la sii daayo filimka, Khan qaaday jabsaday lix bilood ah ka soo matalaya. Waxaa uu sheegay in intii uu nasasho, ayuu "ku faraxsanaayeen dareen reer Murugo". Khan ayaa sidoo kale jilay garab Madhuri Dixit iyo Salman Khan ee-riwaayad qoyska Hum Tumhare Hain. Filimku wuxuu, kaas oo ahaa in samaynta muddo lix sano ah, ay sabab u kala go'ayn dhibaatooyinka soo saarka, ah grosser celcelis ahaan xafiiska sanduuqa. 
5.2003 : dhaawac kheyr iyo qalliin ku xigaEdit
Bishii December 2001 , halka Lily muuqaalka gaar ah Krishna Vamsi ee Shakti : Power The , Khan dhaawac dhabarta ah halka qabanayaan saleynayo ficil [ 86 ] wuxuu u duulay Adariya toddobaadkii dambe for taxane ah oo marxalad shows taas oo keentay inay jirba dheeraad ah . xaaladdiisa . [ 86 ] By waqti aad u Mumbai wuu soo noqday , Khan uu ahaa aragga xanuun aad u daran . [ 86 ] wuxuu ahaa cudurka disc a prolapsed u dhexeeya araxda lix iyo toddoba . [ 86 ] Khan isku dayeen dabiibka alternative kala duwan ka soo homeopathy si Fasal Xaaji laakiin waxba ku bixiyeen in xal waara loo . [ 86 ] wuxuu markii dambe toogtay Devdas ( 2002 ) iyo Chalte Chalte (2003) in xanuun ba'an oo sii biqil for Kal Ho Naa Ho (2003) . [ 86 ] [ 87 ]
By bilowgii 2003 , Khan xaalad aad u ba'an sii xumaatay . [ 86 ] [ 88 ] [ 88 ] Bishii Febraayo , Khan waxaa loo sheegay by dhakhaatiirta ee uu lahaa si uu u maro Cervical Discectomy degdeg ah iswadda . [ 89 ] [ 88 ] [ 90 ] qaliin The meel on 24 February ee Isbitaalka Wellington , London iyo qaatay muddo hal saac - . disc titanium a la galiyay in uu laf-dhabarka oo uu soo saarey laba maalmood ka dib markii [ 86 ] wuxuu wajahay dhibaatooyin post -operative dhowr ay ka mid yihiin xabeeb , daciifnimo , xanuun iyo sare halista infakshanka . [ 86 ] [ 89 ] wuxuu u bilaabeen Kal Ho Naa Ho (2003) iyo Main Hoon Na ( 2004 ) tooganayasa in June of si kastaba ha ahaatee isla sanadkaas , dhaawac keentay Khan hoos jarida noticeably on shaqo iyo yaraynta uu tirada filimo ah sanadkiiba . [ 87 ] [ 91 ]
Sannadkii 2003 , Khan soo saaray iyo jilay Aziz Mirza ee , Chalte Chalte , jacayl ah ka qabashada dhibaatooyin ka soo food by lamaane is qaba , ka soo horjeedka iisulwasaaraha oo . Filimku wuxuu ahaa dhexdhexaad ah lagu guuleystay in Hindiya iyo wixii intaa , si fiican suuqyada dibada nabdoonaa [ 92 ] [ 93 ] deyntiisa soo socda ahayd Kal Ho Naa Ho , dramedy a dhigay Magaalada New York; . Qoray Karan Johar , si toos ah by Nikhil Advani iyo wada - cardigan Jaya Bachchan , Preity Zinta iyo Saif Ali Khan . Khan helay mahadnaq muhiim u tahay sanadihii hore wixii qadaf ah ee Aman Mathur , nin qaba cudur wadne dilaa ah . Hindu ayaa xustay , " isaga oo xamaasad Fadli , isaga oo tamar adeeein , Shah Rukh waa in foomka halkan . Oo sidii nin leh maalmo kooban oo ay ku noolaadaan iyo nolol ay u hoydaan daqiiqad , ayuu ka eegayaa aad la jeceel . Wuxuu hoos u dhigta badan si ay ilmada . iyo ilmaysiisa kasta oo uu u kacda rank sare ee milatgariga of jilayaasha " . [ 94 ] filimka waxa uu ahaa guul muhiim ah iyo ganacsiga , noqoto filimka labaad ee ugu sareeya Idman gudaha iyo Bollywood filimka top Idman suuqa dibada sanadkaas . [ 92 ] markii [ goorma? ] habeeyaa sicir bararka total its adduunka guud waxaa loo INR 1.3 bilyan . [ 95 ] Filimku wuxuu isaga Filmfare Best Award Actor magacaabista kale kasbaday .
6.2003-10: jilista iyo ogeyEdit
Khan leh Kajol iyo Karan Johar at the 2010 Berlin International Film Festival ay filimka My Name Ma Khan .
2004 wuxuu ahaa sanad halis ah oo ganacsigooduna for Khan . Wuxuu soo saaray iyo jilay Farah Khan ee ugu horeeyay directorial , tallaabo comedy ku Main Hoon Na garab Suniel Shetty , Sushmita Sen , Kirron Kher , Amrita Rao iyo Zayed Khan . Wax ka qabashada account a fictionalized ee xiriirka Hindiya - Bakistaan ​​, filimka ah a guusha weyn ee ganacsiga . [ 96 ] markaa wuxuu ciyaaray ah Air Force tijaabo Indian , Hoobiyayaal Hogaamiyaha Veer Pratap Singh in Yash Chopra ee jacaylka taxanaha Veer - Zaara garab iisulwasaaraha oo oo Preity Zinta . Filimku wuxuu ahaa hit ugu weyn ee 2004 ee labada Hindiya iyo dibada , oo leh guud ee adduunka ka badan INR 940 million [ 78 ] [ 96 ] iyo Iagu 55aad Berlin Film Festival in ay mahadnaq muhiim ah . [ 97 ] Veer - Zaara , taasoo oos jacaylka Singh iyo qof dumar ah oo Pakistani , Zaara Haayat Khan ( Zinta ) kexeeyeen Khan mahadnaq leh Rama Sharma ka qoraal Tribune , " Shah Rukh Khan halkan qaaddey dhaadheer, waqtigan xasaasiga ah , anigoo goor wanaagsan ee kor ku nasakhay ah . weedho ku jiraan dad waaweyn ka gaari out to taaban qalbiga dadku ay wadaagaan . " [ 98 ]
Bishii December 2004 , Khan ballaaran ka helay ogey , isaga oo waxqabadka ee Ashutosh Gowariker ee riwaayadaha bulshada , Swades . Sidoo kale featuring Gayatri Joshi , Swades Abuu Bakar sheekadii saynisyahan NASA ah kuwaas oo ku soo laabtay Hindiya si ay u hesho la xiriir Oo xididdadiisuna . Dhowr filimada naqdiya tixgelin Khan waxqabadka filimka inuu noqdo isaga oo ugu fiican ilaa taariikhda . [ 8 ] Ansaarul Jitesh Pillai falanqeeyay , " Ugu dambayntii waxa qalbigaaga ku soo booda u sixir ah Shah Rukh Khan , kuwaas oo unarguably siinayaa waxqabadka fiicnaa mustaqbalkiisa ee . Laxo ee dhagarta kasta ama tamar habdhiska , isaga oo cidhiidhi iyo waa la taaban karo . wuxuu kala degtaa Mohan Bharghava fudayd consummate , waxa aad dareemi kartaa lillaahinimada ee ku baajiyeen , surtoobee oo ilmo uu " . [ 99 ] Filmfare ka mid waxqabadkiisa sanadkii 2010 arrinta of the " Top 80 jimcaha la sameeyay " . [ 100 ] wuxuu ahaa sharaxan Filmfare Best Actor Award for dhan saddex of sii daayo oo uu sannadkii 2004 , iyo ugu danbeyn ku guuleystay abaalmarinta for Swades . [ 96 ] filim laftiisu ahaa featured liiska Xusay ee 10ka Best Bollywood Movies of the Toban . [ 101 ]
Waxa uu sii daayo kaliya ee 2005 , Jawan soo horjeeda iisulwasaaraha oo , Iagu Film Tirinta Madax ka Festival oo loo doortay Hindiya ee rasmiga ah in ay la gurayo , waayo 79- Academy Awards entry . [ 102 ] Inkastoo nabadgelyo ee at the - xafiiska sanduuqa , Jawan ahaa loo amaano , sida uu ahaa Khan ee waxqabadka , taasoo Raja Sen loo yaqaan " A waxqabadka u oolli-jirin , [ That ] sababaha uu sarraynta ee dunida filimka " . [ 103 ] sanadka soo socda ayaa , Khan gacan saar la leeyihiin Karan Johar for markii saddexaad ee ka - riwaayadaha dadka waaweyn , Kabhi Alvida Naa Kehna . Iyada oo iska tuur, an ensemble ay ka mid yihiin Amitabh Bachchan , Preity Zinta , Abhishek Bachchan , iisulwasaaraha oo iyo Kirron Kher , filimka ayaa sheegay in sheekadii laba lamaane unhappily guursaday ee New York , taas oo keentey in arrin ah niman aan . Khan ciyaaray doorka Dev Saran , ciyaaryahan qadhaadh iyo gedaaman kubada cagta hore , waa kuwa kamidyihiin xaaskiisa ( Zinta ) guulo sida editor majaladda fashion ah . Filimku wuxuu ka helay reviews Wakaladda ka soo filimada naqdiya laakiin ah a guusha weyn ee ganacsiga ; . Baxaya sida grosser ugu weyn India ee suuqa dibada , oo leh dakhliga ka badan INR 1.13 billion oo dunida ah [ 78 ] [ 104 ]
Wuxu la essayed doorka Malasfax in bixijirey ficilka , Don , Jen ah 1978 filimka of isku magaca . Filimku wuxuu sidoo kale Khan comments isku qasan ka heshay filimada naqdiya . Isaga oo qabadka ahaa oo marar badan marka la barbar dhigo in ee Amitabh Bachchan , Aktarka ee asalka ah . [ 105 ] Taran ceyrow sheegay in Khan " ma aad u wanaagsan sida Don . Wuxuu Kongreeska qof sharka leh barwaaqoobi doonaa . Laakiin uu ku guuldareysto inuu qaado off doorka kale [ Vijay ] Xukuntay . Waxay u egtahay ilaa sameeyey , waxa aanu u iman dabiiciga ah isaga at dhan . " [ 105 ] Iyadoo Derek Elley of kala duwan ku dooday in " waa adag tahay in la aqbalo ( Khan ) sida qof horyaalka " iyo in " Khan waa meel fog wax qancin sida Vijay , ilaa ciyaaro si uu Rooma - com raacsan waxaad aaddaa kaftan waxay isugeyn . " [ 106 ] filimku wuxuu noqday filimka shanaad ee ugu Idman ee sanadkan ee Hindiya [ 104 ] iyo filimada ugu sareeya Idman ee sannadka suuqa dibada . Waxa saamayn guud ahaan INR 1.04 billion oo dunida ah . [ 78 ] Labada Kabhi Alvida Naa Kehna iyo Don isaga kasbaday magacaabidda Best Actor at Filmfare ah , halka tan dambe ayaa isaga Actor magacaabista a Best at the Awards Asian Film kasbaday .
Sannadkii 2007 , Khan saftay Yash Raj Films ' Chak De ! Hindiya , xisaab a semi- khayaalka oo ka mid ah kooxda Indian haweenka xeegada qaranka . Khan ayaa sheegay in halka uu asal ahaan wuu caawiyey inta lagu guda jiro Cabdijibriil oo ( wuxuu qayb ka mid ah kooxda ciyaarta xeegada jaamacaddii uu ahaa inta lagu jiro iyo u hawaystay noqon ciyaaryahan xeegada xirfadeed ka hor inta uu ku xanuunsaday dhaawac dhabarka ah ) , wuxuu dareemay ciyaaro mar kale waqti dheer ka dib wuxuu ahaa " mid aad u adag oo kala duwan " . Khan jeexjeexay muruqa ah saddex maalmood ka hor Cabdijibriil oo ahaa in ka badan . [ 28 ] [ 107 ] [ 108 ] Chak De ! Hindiya wuxuu ahaa guul weyn oo muhiim ah oo ganacsi ee Hindiya iyo dibadda . [ 109 ] shaqeysato weyn INR 1,03 bilyan oo dunida oo dhan , [ 78 ] Rajeev Masand ka soo CNN - ibn qoray oo ku saabsan waxqabadkiisa , " wixii ugu horeysay tan iyo Swades time , Shah Rukh waxay kaalin iyada oo mid ka mid ah uu baahiyihii la mid ah , iyada oo aan wax ka mid ah adal uu astaanta sheyga . ilkahooda wuxuu India ee qaybta ka ah tababaraha goostay iyo yimaado ilaa leh sida waxqabadka a heer sare ah . Waxa uu rajo at times iyo xanaaqa at dadka kale , waxa uu kaftan ah waqtiyada , iyo xaggii dambe ee doonnida at dadka kale . Waxa uu ciyaaraa Kabir Khan sida dhabta ah insaanka ee jidhka - iyo - dhiig . " [ 110 ] Filmfare sidoo kale waxaa ka mid ahaa inuu qabadka ee 2010 arrinta of the " Top 80 jimcaha la sameeyay " . [ 9 ] Chak De ! Hindiya noqday filimka saddexaad ee ugu Idman of 2007 ee Hindiya iyo badisay Khan weli Award kale Filmfare for Best Actor .
Isla sanadkaas , Khan jilay Farah Khan filimkiisa labaad , Om Shanti Om garab Deepika Padukone , Shreyas Talpade iyo Arjun Rampal . In melodrama dib-u- wayni waxay , Khan essayed doorka Om Prakash Makhija , artiste a yar laga soo 1970- kii waxaa la Madxweynaha sida xiddiga la odhan jiray Om Kapoor ee 2000 . Waxqabadkiisa oo guud ahaan si fiican helay by dhaleecayn ; " . [ T ] ayuu shirkada ganacsi iska leh Shah Rukh Khan , kuwaas oo ka dilaacay xerada comedy , riwaayadaha sare iyo ficil leh style si uu u saxiixo - lama filaan ah iyo intuitively waxgarad " Khalid Mohammed ka soo Hindustan Times ka qoray , [ 111 ] filimku wuxuu ku ah sawir sanadka ee ugu sareeya dhaqdhaqaaq Idman ee Hindiya iyo suuqa wadamada guud ee adduunka ka badan INR1.48 bilyan . [ 112 ] Om Shanti Om isaga magacaabista kale jilaaga xaflad Filmfare ku kasbaday , inkastoo uu ku guuleystay abaalmarinta for Chak De ! Hindiya . Sannadkii 2008 , Khan gacan saar la leeyihiin Aditya Chopra for markii saddexaad for riwaayado ka taataabtay doorashooyinkii ka , Rab Ne Bana Di Jodi , dhawaan ka soo horjeeda Anushka Sharma . Khan ciyaaray Surinder Sahni , nin xishood leh hooseeyo sharaftooda , kuwaas oo jacayl ah ee xaaskiisa shil ah ( Sharma ) , wuxuu sababaa isaga inuu kooxdaas ayaa bedali - amarnay in cod dheer iyo xiiso - jecel ee Raj . Filimku wuxuu ka helay reviews isku qasan ka soo filimada naqdiya , laakiin waxaa lagu dhawaaqay Saylac Lughaya a at the - xafiiska sanduuqa . [ 113 ] oo uu qabadka ahaa appreciated by dhaleecayn , iyo Raaxeel Saltz of The qoraal New York Times , " The door dual Surinder / Raj u muuqataa dawaarlaha - sameeyey ( malaha ahaa ) ee Mr Khan , kuwaas oo uu helo si ay u muujiyaan off talanti oo mataankiisii ​​: wuxuu nobly soo gaartaa iyo entertains leh panache " [ 114 ] Waxaa isaga weli magacaabista kale jilaaga xaflad Filmfare ku kasbaday . . Bishii December ee isla sannadkaas , Khan dhaawac ah garabka halis ah halka Afgooye door Weah Deshpande ee Dulha mil Gaya ah . Wuxu la Hon fadhiyada daaweynta dabiiciga ah ballaaran waqtiga , laakiin sabab u ah xanuun aad u weyn in isaga dhawaad ​​jidkan qarqoora ee tagay , wuxuu lahaa maro qalliin soo hooyeen tartankii ah bishii Febraayo 2009 . [ 115 ] [ 116 ]
Ka dib markii uu hoos fursad lagu star ee Danny Boyle ee Oscar badisay mMaraykanka Qaramada soo jeestay , Khan bilaabay rasaas ku for My Name Ma Khan , isaga oo wada shaqeyn afaraad agaasimaha , Johar iyo lixaad leh jilaa , Kajol . [ 117 ] [ 118 ] ku salaysan sheeko run ah , iyo dhigay hortegi lahaa ee fahamka on Islam , boostada 11 September weeraro , filimka featured Khan sida Rizwan Khan , nin Muslim dhibaato ka soo khafiif ah - Asperger syndrome , kuwaas oo sharxaya on safarka ah qaarada Ameerika si ay ula kulmaan Madaxweyne ee dalka . Khan bixisay dhowr bilood ka baarto by akhrinta buugaagta , daawashada cajaladaha iyo hadalka dadka ay saameeyeen leh cudurka dadaalo in ay sawir qof ee Rizwan Khan . [ 119 ] Waraysi uu la yeeshay Hindustan Times ayuu yiri , " Mar kasta oo aad kula a qabashada disorder ama xaalad dhow bogageeda , siday maleeyeen kuwii ugu horeeyay ee waa in nooca argument aad leedahay si ay dhigay in jirin habka aad tahay yaraysto ama waad quudhsataa cudurka . Qaybta labaad waxa loo aad qabto in ay yimaadaan sida u dhow xaqiiqda ee hunuuda ah dabeecad iyo sidaas darteed hal lahaa inaad barato wax badan oo ka mid ah ma heli walwalsan tahay " [ 120 ] Marka uu sii daayo , My Name waa Khan reviews wanaagsan ka heshay dhaleecayn iyo ku noqday ugu sareeya Idman Bollywood ee dhan - time suuqa dibada . Khan waxqabadka filimka ahaa appreciated by dhaleecayn ugu with Jay Wesissberg kala duwan ka dib u eegidda , " Khan wuxuu isticmaalaa mannerisms la xiriira Asperger ee - indhaha oo Ciuddii , tallaabooyinka springy , stuttered ku celcelinina qoraalo xafideen - weli qabsatay Shaqsiyadda xaaladda in waxqabadka standout la hubo ay dureeri si aad u hesho shaabad oo dahab ah Society Autism ku ansixiyo . " [ 121 ] My Name waa Khan kexeeyeen Khan uu Filmfare Award siddeedaad Best Actor , kortaan xagga diiwaanka jilaaga Dilip Kumar la wadaago .
7.2011 - jooga : ee kale ContinuingEdit
Khan leh co- stars Kareena Kapoor iyo Arjun Rampal inta lagu guda jiro Ciyaar of Ra.One ee London
Sannadkii 2011 , Khan soo saaray iyo jilay Anubhav Sinha ee Jaamac Maxamuud qabta Ra.One , garab Arjun Rampal iyo Kareena Kapoor . Filimku wuxuu , taasoo socota sheekada naqshadeeye a London -based videogame kuwa abuurtaa gool kulaad ah in baxsado dunida ku ambadeen dunida dhabta ah gelin , oo ahaa dallici sida wax soo saarka ugu qaalisan Bollywood ee leh miisaaniyad lagu qiyaasay INR125 crore (US $ 20 million ) [ 122 ] [ 123 ] Khan ku lug dhinacyo dhawr ah qaadasho ee Ra . Mid ka mid ah - ayuu si iskeed ah u qori script ciyaarta Console filimka ee , ku duuban waxaa loogu talagalay , garaysan horumarinteeda farsamo; . Ayuu sidoo kale qoray kartoonka digital ku salaysan characters filimka ayaa [ 124 ] [ 125 ] Marka uu sii daayo , Ra.One ah sanduuq guul xafiiska , oo leh guud oo ah INR 2.4 bilyan . [ 126 ] [ 127 ] iyo reviews helay isku dhafan . Waayo, wixii qadaf ah ee door laabaad ee filimka , Khan helay comments isku dhafan ; halka dhaleecayn ugu amaanay waxqabadkiisa sida qabta ee joofane G.One , waxay panned ah mid ka mid ah Shekhar , naqshadeeye videogame ah . Rajeev Masand qoray : " The waxqabadka standout dhabta ah oo kaliya waa by Shah Rukh Khan uu Aiyyo ku hadla Shekhar Subramaniam waa caricaturish laakiin jiidasho , halka sida G.One , wuxuu ku siinayaa xataa inuu joofane qof video - kulanka gees ah ku yimiday . . " iyo DNA India ku daray: " Khan waa in uu curiye iyo dhaqan dooriska sida qabta G.One , laakiin annoyingly weyn sare ee abuuraha ciyaarta video Shekhar " [ 128 ] [ 129 ] .
Deyntiisa labaad ee sanadka ahayd Don 2 , tahayna in la 2006 hit the , Don . [ 130 ] In si ay isugu diyaariyaan uu door , Khan oo marar badan jimicsi sameyn iyo sameeyaa inta badan ka baqda isaga qudhiisa . [ 131 ] oo uu waxqabadka isaga comments wanaagsan kexeeyeen laga bilaabo dhaleecayn leh Nikhat Kazmi of The Times of India oo ogaaney , " Shah Rukh ayaa weli ah ee amarka iyo marnaba lumiyo uu raadkoodu , ma iyada oo isku xigxigta riwaayado midna jeexan tallaabada . " [ 132 ] filimka waxa uu ahaa guul weyn ka Hindiya iyo waxa u galay on si ay u noqdaan ugu sareeya Idman wax soo saarka dibadda Bollywood sanadka ee leh guud ee adduunka ee ka badan INR 2,06 bilyan oo . [ 133 ] [ 134 ] Don 2 ahaa muujinayeen at 62aad Berlin International Film Festival [ 135 ] iyo weheliyaan Don at 2012 Caalamiga Film Festival of Marrakech ee Marooko . [ 136 ] Intaa waxaa dheer , waxaa isaga magacaabista kale jilaaga xaflad Filmfare ku kasbaday . [ 137 ]
Khan sii daayo kaliya ee 2012 wuxuu ahaa Yash Chopra ee riwaayadaha ka taataabtay doorashooyinkii la soo dhaafay Jab Tak Hai Jaan , ka soo horjeedka Katrina Kaif iyo Anushka Sharma . [ 138 ] Waxaa ugu adeegay sidii ay iskaashanayaan afraad ee u dhexeeya Chopra iyo Khan , [ 138 ] ku soo noqonaya sida uu agaasime ka ahaa siddeed sannadood, ka dib markii post hore Veer - Zaara , kaas oo la sii daayay sanadkii 2004 [ 138 ] iyo ugu danbeyn noqon lahaa la soo dhaafay hawgal directorial Chopra ayaa ka hor dhimashaddiisii ​​on 21 October 2012 . [ 139 ] Filimku wuxuu ka soo dhaleecayn ee Hindiya iyo reviews wanaagsan ka helay wanaagsan in ay dib u eegista isku qasan ka soo dhaleecayn dibada . Jab Tak Hai Jaan on galay inuu noqdo mid ka mid ah ugu sareeya Idman filimada Bollywood ee waqtiga oo dhan labadaba Hindiya iyo abread iyo dhawaaqey a " Saylac Lughaya adduunka " oo leh dakhli ka badan INR 2.11 billion . [ 140 ] [ 141 ] Filimku wuxuu ahaa muujinayeen at the 2012 International Film Festival of Marrakech ee Marooko . [ 136 ] Waayo, waxqabadkiisa filimka , Khan ayaa loo magacaabay for Filmfare Award a jilaaga .
Bishii Agoosto 2013 , Khan soo saaray iyo muuqday Rohit Shetty ayaa tallaabo comedy Chennai Express ee hoos shirkaddiisa Red karri Entertainment . In kasta oo kasbanayaan jawaab muhiim ah oo isku dhafan , filimka jebiyey aqlabiyadda ah ee diiwaanka xafiiska sanduuqa filimada Hindi ee Hindiya iyo dibadda iyo noqday filimkii ugu dhakhsaha badan u geli jeelka Bollywood 100 crore Club . [ 142 ] [ 143 ] Filimka on galay inuu jebiso rikoor of 3 Jeesteeye sidaas noqoto ugu sareeya Idman Bollywood ee waqtiga oo dhan iyo dhawaaqey Saylac Lughaya a ee Hindiya by Box Office Hindiya . [ 144 ] [ 145 ] Waxaa ugu dambaynta saamayn ku dhawaad ​​INR4 bilyan (US $ 64 million ) ee iibka tigidhada adduunka iyo waa agaasimaha hadda ugu sareeya Idman Bollywood film labaad ee adduunka . [ 146 ] Khan waa la Afgooye for Farah Khan ensemble comedy Sannadka Cusub Happy kaas la Deepika Padukone , Abhishek Bachchan iyo Bipasha isaga garab . [ 147 ] Waxa uu sidoo kale dhawaan la saxiixay Rahul Dholakia ee soo socota filim la yiraahdo Raees , iyo in la soo saaro doonaa by Excel Entertainment . [ 148 ]
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named billion2
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Richest Actors2
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named thetimes12
↑ Chopra 2007, p. 27: "born on 2 November 1965 at Talwar Nursing Home, in New Delhi"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shahrukh_Khan&oldid=202387"
Last edited on 16 Juun 2020, at 17:48
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Juun 2020, marka ee eheed 17:48.